2015 – Page 3 – danwadaagforening.se
Jaaliyadda Danwaadag waxa ay caruurta ka diiwaan gashan geysey Leas lekland Borås oo ah meel si fiican loo diyaariyey in ay caruurta ku ciyaaraan. Shalay oo tariikhdu aheyd 27/9 2015 ayey caruurta Danwaadag u aheyd maalin ay aad iyo aad weyn oo aan la ilaabi karinmaadaama fursad loo siiyey in ay si wadajir ah ugu
Maanta oo ay taariikhdu tahay waxaa ay Jaaliyadda Danwadaag qabatay hawahii aheyd Dhaqanka iyo Hidaha oo la qabto maalin kasta oo jimca ah saacadda kl 16.00 – 19.00. Hawsha waxaa loo qabtay si wanaagsan, waxana loo agaasimay si heer sare ah. Sawira badan ayadana lasoo gelindoonaa mustaqbalka dhow insha alah.
Jaaliyadda Danwadaag waxay ka qeybqaadaneysaa [SI AAKHRI]